KIA , OPTIMA , 2019 GT LINE , YGN – Super Seven Stars
KIA , OPTIMA , 2019 GT LINE , YGN
KIA Optima GT LINE သည် Engine power 2.4 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Midsize Sedans /5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
Kia Optima GT Line 2019 New Facelift တွင် All New V-shaped Mesh pattern grill, LED Projector beam headlights Headlamps, LED Day Time Running Light and New Design Projection beam fog lamps,Sporty Body Kit များပါဝင်သည်။
Kia Optima GT Line သည် Sport ကားများ တွင်သာ ပါဝင်သော Dual Oval-Shaped Exhaust Outlets with Rear Diffuser တပ်ဆင်ပေးထားသည်။ Rear Diffuser ကြောင့် ကား၏ လေခွင်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Rear Diffuser သည် Vehicle Under Body တွင် Low Pressure Air Flow ကို Rear Diffuser ကြောင့် High Pressure Air Flow အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး ကား၏တည်ငြိမ်မှု Stability ကို ပြိုင်ကားတစ်စီးမောင်းနှင်ရသကဲ့သို့ စိတ်တိုင်းကျစေပါမည်။ CO2 emission ကို လျော့ချ ပေးပါသည်။
Kia Optima GT Line made with Advanced High Strength Steel (AHSS) substantially increases body rigidity, while hot-stamping of components in 16 core stress areas helps boost body structure for better driving dynamics andaquieter ride.
Kia Optima 2019 ၏ Safety & Crash Test ကို National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) တွင် စမ်းသပ်ရာတွင် Overall Five Stars အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရရှိခဲ့သည်။
Kia Optima GT Line တွင် အသက်ကယ်လေအိတ်(Air Bag)7လုံးပါဝင်ပါသည်။
Kia Optima 2019 GT Line 2400cc engine6speed Automatic Transmission သည် 0-100km ကို 9.8sec အတွင်းရောက်အောင် အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Kia Optima GT Line ၏ Fuel Consumption သည် မြို့တွင်း 22 မိုင်
မြို့ပြင် 32မိုင်ထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။
Kia Optima GT Lin Center Console တွင် ကားမောင်းသူအတွက် လိုအပ်သော အဆင်မြင့် Function များ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ Drive Mode, Electronic Parking Brake with Auto Hold,Parking Sensor Control, 360 Surround View, Air Ventilation, Heated Steering Wheel များပါဝင်ပါသည်။
Kia Optima GT Line တွင် Safety Function တစ်ခုဖြစ်သော Rear Cross Traffic Alert ပါဝင်ပါသည်။
Supervision Cluster with 4.3-inch multi-info instrument cluster display